Concern about the killings of Oromo students in the Amhara Region (Open Letter from OSA) – Kichuu
HomeNewsAfricaConcern about the killings of Oromo students in the Amhara Region (Open Letter from OSA)
Dr. Abiy Ahmed Ali, Prime Minister
I. Immediately pull all Oromo students from the affected Amhara regions and enroll them in universities in Oromia or other safe regions;
II. Bring to justice those who perpetrated criminal acts against Oromo students; put in place a process which safeguards and protects Oromo students from similar harm in the future;
III. Provide support, counseling, and advise to all affected students who remain within the troubled areas or have managed to escape;
IV. Assure the safety of all students in Oromia, Oromos, and non-Oromos likewise, against any revenge or imposter harm;
V. Help Oromo students who were conditioned to leave the Amara region enrolled in Universities in Oromia;
VI. Criminalize hate speech and [the practice of ] romanticizing king Menelik II and his army Neftegna just as romanticizing Adolf Hitler, Nazi and the Holocaust [denial] are criminalized in the Western World.
Balbala Yunversiitii Waldiyaa
Yunvarsitii Waldiyaatti lubbuun barataa waggaa sadaffaa tokko darbuu yunvarsitichi himeera. Yunvarsitichi barataan Abdii Waaqoo jedhamu rakkoo fayyaa mudateen du’e yoo jedhu, barattoonni isa waliin turre jedhan garuu reebiicha waardiyyootaa irraa kan ka’e ta’uu BBC’tti himaniiru.
(bbcafaanoromoo)—Yunvarsitii Waldiyaatti barataa waggaa sadaffaa Peedaagoojii ta’uun isaa kan himame kun rakkina fayyaa isa mudatee lubbuun darbuunsaa kana kan beeksiise fuula feesbuukii isaarratti.
Barattoonni BBC’n dubbisee akka himaniitti, ”barataa Adii Waaqoo kan du’ee miidhaa reebichaan irratti raawwateen” jedhaniiru.
Haata’u malee, Yunivarsitiin Waldiyaa du’a barataa Adii Waaqootti gadda itti dhagahame ibsuun ergaa fuula feesbuukii isaarratti maxxanseen, barataan kun rakkoo fayyaa mudateen ALI Sadaasa 26, 2012’tti kiliniika yunivarsiticha keessatti aragamuutti qorannoon taasifamuufiisaa himeera.
Isaan boodas wallaansa fooyya’aan akka taasifamuuf jecha gara Hospitaala waliigalaa Waldiyaatti ergameera jechuun ibseera.
Haata’u malee, osuma wallaanamaa jiru, Sadaasa 27, 2012 alkan keessaa sa’aatii torba irratti lubbuun barataa kanaa darbuus himeera.
Barattoonni BBC’n dubbise garuu nageenya isaaniif jecha maqaansaanii akka hineeramnee gaafatan akka himaniitti, barataan amma lubbuunsaa darbe kun wayita reebichi irratti raawwatamu isa waliin turuufi ijaan akka argan dubbatu.
Haalli nageenyaa Yuvarsiiticha keessaa ture amansiisaa waan hin taaneef gara maatiitti deebi’uuf yunvarsiiticha gaafatanii eeyyama dhabanii, Roobii darbe galgalaan miliqanii gara maatiitti deebi’uuf yaalaa turuu himti barattuun waggaa tokkooffaa ta’uu himatte tokko.
”[Adiin] nu gaggeessuuf nu wajjin deeme. Achiinis waardiyoota mooraa yunvarsitii kan ta’an namoota afuriitu nu reebe,” jechuun haalli barataan kun ittiin du’ee reebicha irra gaheen ta’uu himti.
Miliqanii gara maatiitti deebii’aa jiraachuun barattoota kanaa waariyyoota kanneen eeruun akka qaqabee kan himtu barattuun kun, erga baajaajii qabataniin booda waardiyyoonni jedhaman kunneen qaqabuun ijollee baajaajii oofan dabalatanii reebicha irratti raawwachuu dubbatti.
Isaan boodas, humnaan qabamanii mooraatti deebiifamuu ibsiti barattuun kun.
“Mooraatti erga deebiine boodaa waaridiyyoonni afur akka maleetti nu reeban,” kan jettu barattuun kun, ”barataa Adii Waaqoo ammoo addaatti dhidhiitaa turan” jetti.
”Ati du’uu qabda, jiraachu hin mallee” jechaanii turan kan jettu barattuun kun, meeshaa waraanaan illee akka dorsifaman himti.
Sa’aatiin reebiichi kun itti raawwatamees guyyaa Roobii galgala keessaa naannoo sa’aatii 12 ta’u kan himte barrattuun maqaashee dhokfattee kun, ”nama mooraa sanaa tokkotu akkamiin ijoollee reebiduu jechuun nurra dhoowwe” jetteetti.
”Sanaan boodas Adiin akka malee dhukkubaa ture; bishaan nu gaafataa ture. Achumaanis kilinika mooraa yunvarsiiticha geessanii qoricha kennaniifi turan. Guyyaa lammaaffaatti barii lafa ka’uu dadhabe.”
Itti dabaluunis, ”Lapheefi kaleekootu na dhukkuba jechaa ture. Akkasumas afuura fudhachuu dadhabaa ture,” jechuun kan arge jettu himti.
Barataan yunvasritichaa BBC’n dubbise kan biraas, yaaduma walfakkaatu hima.
Barataan nageenya isaatiif sodaachuun akka maqaansaa hinhimamnee dubbate kan biraa, Adiin dhiiga tufuusaas akka argee hima.
”Reebamuu isaan booda Adiin of danda’ee dhaabachuufillee rakkachuu isaa argeera,” jedha.
Barataan Adiidhaaf hirriyaa isaa dhiyoo ta’u himu kun, ”Amma ati mooraa kana keessaa baatutti ijoolleen nagaa hin argattu jechuun isa reebuu natti himeera,” jedha.
Haata’u malee, Adiin xabataafi barataa nagaa ta’uun alatti mormiiwwan dallaa keessatti gaggeeffaman kamiyyu keessatti hirmaannaa kan hinqabne ta’uu barattoonni hirriyyoota isaa ta’uu himan kunneen ni himu.
Wayita ammaa kanattis hamilee sirriin barachaa akka hin jirreefi maatii isaanitti deebi’uu akka barbaadan barattoonni kunneen ni dubbatu.
Rakkoo nageenyaa Yunvarsitii Waldiyaa keessatti dhiheenya kana uumameenis, barattoonni lama lubbusaanii dhabuun ni yaadatama.
OMN: ODUU GUYYAA (Mudde 09, 2019)
OMN: Guyyaa Ayyaana Sabaaf Sablammoota (Mudde 09, 2019)
Badhaasni Noobelii kun badhaasa guddaadha. Ilaalcha siyaasaa MM Abiyyi jaalannees jaalachuu baannees, badhaasnii kun bara Oromoon Itoophiyaa bulchutti yeroo jalqabaaf argame. Kun ilmaan Oromoo mataa akka ol qabatan waan goduudha. Akkuma beeknu Afaan Oromoon waltajjii aduunyaa guddaa akkasii irratti hasa’aamee hin beeku. MM Abiyyi waltajjii guddaa kana irratti afaan Oromoo beeksisuuf carraa guddaa argateera. Itti fayadamuu qaba. Oromiyaa keessatti kun injifannoo Oromooti jechaa waltajjii aduunyaa irratti kun akka mul’atu gochuu baannaan seenaan nama gaafata. Namni “badhaasnii kun injifannoo itoophiyaanoota hundaati akkamitti akkas jeetta” jechuu mala. Deebiin kiyya, afaan tokko qofatu Itoophummaa bakka bu’a ilaalchi jedhu darbeera dha. Itoophuummaan afaan ummata biyyattii harka 40 ofiitti hin fudhane Itoophuumaa sirrii miti. Haa xiqqaatu afaan lameenuu wal duraa duuba fayyadamuu qaba.